Uhlu Lwezingcingo lwebhizinisi lase-UK | Inombolo Yeselula yase-UK | Database lakamuva
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu Lwezingcingo lwebhizinisi lase-UK
Izinombolo zefoni yasebhizinisi lase-UK
Uhlu lwefoni yasebhizinisi lase-UK luhlanganisa imininingwane yokubiza ukubanda yenkampani yakho. Idatabase Lokumema Kamuva lingenye yezinkampani ezihlinzeka kakhulu ngohlu lomakhalekhukhwini emhlabeni. Uzothola lonke uhlu lwezinombolo zebhizinisi olunembile. Uhla lwethu lonke lwezinombolo zeselula lungenile futhi kuqinisekiswe umthengisi wabantu nezimoto. Uzothola lapha ukubuyekeza uhlu lobunye lwebhizinisi lomuntu ohlanganayo.
Database Lokungenamkhawulo lakamuva yinkampani enkulu yokuhlinzeka ngocingo yabamakhalekhukhwini Futhi ungakha uhlu lwakho lwefoni ephathekayo kusuka kumuntu webhizinisi le-uk. Uma ufuna ukwakha uhlu lwakho lomuntu othize weselula ovela e-UK ungakhuluma nethimba lethu labakhi bemininingwane. Vele usitshele ukuthi hlobo luni lwefoni okuholela oludinga kusuka e-United Kingdom. Ngakho-ke iqembu lethu lizokwakha uhlu lwakho nenombolo yocingo ethize.
Thenga i-UK B2B Izinombolo Zenombolo
Inani Lamarekhodi: 250k
UHLU LWEZIMALI LOKUQHAWULA KAKHULU lwase-UK
Uhlu lwefoni yasebhizinisi lase-UK luyindawo yokuqhafaza ethola abemukeli abajwayelekile okuluhlu olufanele futhi oluqinisekisiwe lwebhizinisi e-UK olufakiwe kuhlu. Idatha enenzuzo enkulu esetshenziselwa ukubiza okubandayo, ukuthumela izingcingo kanye nolunye isu lokumaketha ukuze ilusizo kakhulu uma kuziwa ekuthuthukiseni ibhizinisi lakho.
Database lakamuva Lokuposa, isiza esisebenza kahle futhi esingabizi kakhulu mayelana nohlu lwedatha yebhizinisi lokukhankasa kwakho nokuhola umkhankaso wokuhola e-UK njengoba uhlu lwethu lwezingcingo luyisixazululo sebhizinisi lakho elikhulayo lokuthengisa izingcingo nangendlela efanelekayo yokufinyelela ngokushesha kumakhasimende akho.
Lolu hlu lwebhizinisi lase-UK luqukethe amarekhodi athembekile angama-25,000 aqinisekisiwe wohlu lwebhizinisi lebhizinisi afinyelela ku- $ 900, okukhokha ngaso leso sikhathi kanye nesoftware engenziwa ngokushesha engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Database lakamuva Lokuposa, ungumthombo othembeke kakhulu wokuhola kwefoni yebhizinisi, ukhiqize imiphumela eguquguqukayo futhi esebenzayo oyifunayo enkampanini yakho.
UK Business Ucingo Uhlu Umbuzo & Impendulo